Ny fivarotana lehibe indrindra ao Sri Lanka ~ Journey-Assist - Aiza no handehanana any Sri Lanka. Famaritana sy sary
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Sri Lanka » Ny tsara indrindra resorts any Sri Lanka
Hihaona any Sri Lanka
Colombo dia 155 km amin'ny trano. Ity trano fandraisam-bahiny ity dia mety hialana sasatra amin'ny tora-pasika. Maromaro eny amoron-tsiraka. Misy ny wild ary tena mandroso. Mbola eo akaiky eo ny vohitra maro misy tempoly bodista ary tsangambato mahaliana. Ny vanim-potoana tsara indrindra fitsidihana an'i Mirissa dia tamin'ny Desambra-Martsa ary Aogositra-Oktobra.
Lavitra ny seranam-piaramanidina: 178 km
Lavitra an'i Colombo: 155 km
Расположение: Morontsiraka atsimo any Sri Lanka
Zavatra tokony hatao: Fialan-tsasatra amin'ny tora-pasika. zavatra hita
Vanim-potoana: Desambra-Martsa. Aogositra - Oktobra.
Tondro ho an'ny fanamoriana: https://goo.gl/maps/FDpypcLWQJ7zzWc67
Ny renivohitra dia 120 km miala eto. Ity trano fandraisam-bahiny ity dia mety ho an'ireo tia fanatanjahan-tena mavitrika amin'ny rano. Ny fotodrafitrasa eo an-toerana dia ahitana klioba, trano fisakafoanana, trano fisakafoanana ary toeram-pialofana amin'ny làlana. Misy tora-pasika tena tsara tarehy miaraka amin'ny vatosoa tsara tarehy any anaty rano sy ny biby ary ny rano turkosy. Mandritra ny vanim-potoana ambany, dia misy rivotra mahery mifofofofo eto ary lasa paradisa ny mpitia an-tany. Hikkaduwa dia azo antsoina hoe antoko matanjaka iray. Misy dia maro ny mpizahatany izay manao fantsom-boly sy fisitrihana, ary koa fahafinaretana amin'ny fety amoron-dranomasina. Tsara kokoa ny tonga ao Hikkaduwa amin'ny Novambra-Aprily sy Janoary-Martsa.
Lavitra ny seranam-piaramanidina: 143 km
Lavitra an'i Colombo: 120 km
Расположение: Morontsiraka Andrefan'i Sri Lanka
Zavatra tokony hatao: Fialan-tsasatra amin'ny tora-pasika. Hilalao onja. Diving. Hitan'ny olona. Ireo fety amin'ny tora-pasika.
Vanim-potoana: Novambra - aprily. Janoary martsa.
Tondro ho an'ny fanamoriana: https://goo.gl/maps/NVf2RkM1Eo6qvEUb6
Colombo dia 83 km miala amin'ilay trano. Bentota dia hafa noho ny trano fandraisam-bahiny hafa amin'ny alàlan'ny maha akaiky azy ao an-drenivohitra Sri Lankan sy ny seranam-piaramanidina lehibe an'ny firenena (mety ho tonga amin'ny bus izy afaka 2 ora). Endri-javatra iray amin'ity hotely ity koa ireo hotely marobe izay misy kintana 4 sy 5. Bentota dia mety amin'ny fitsidihana miaraka amin'ny ankizy, satria lehibe ny torapasika eo an-toerana, rakotra fasika malefaka, ary ny mando mankany amin'ny ranomasina dia malefaka sady lava. Ireo izay tia fialan-tsasatra fialan-tsasatra dia tonga eto amin'ity tanàna ity. Saingy misy ny fepetra mety amin'ny hetsika, satria marobe ny ivon-tenan'ny fanatanjahan-tena amin'ny rano. Ny volana tsara indrindra hitsidika an'i Bentota dia ny Desambra-Martsa, ary koa ny volana septambra sy Oktobra.
Lavitra ny seranam-piaramanidina: 109 km
Lavitra an'i Colombo: 83km
Zavatra tokony hatao: Beach holidays
Vanim-potoana: Desambra - Martsa. Oktobra Oktobra.
Tondro ho an'ny fanamoriana: https://goo.gl/maps/QHoULCiB3gr2pXwn8
Tanàna fivarotana kely ao amin'ny tapany atsimon'ny Nosy (Distrika Matara). Any amin'ny morontsiraka akaikin'ny fasika tsy misy fasika. Renivohitra 144 km ny renivohitra raha 33 km miala ihany kosa i Halle. Weligama dia mety ho an'ireo mpitia surf. Maherin'ny antsasaky ny halavan'ny morontsiraka no misy morontsiraka midadasika amin'ny fasika volamena, izay tsy misy haran-dranomasina sy vato. Na dia izany aza dia vitsy ny mpizahatany mandry sy milentika eto. Ity toerana ity dia aseho amin'ny onjan-drano matevina sy fotodrafitrasa tsara. Misy sekoly an-tserasera ho an'ireo misimisy miaraka amin'ny tobiny.
Lavitra ny seranam-piaramanidina: 171 km
Lavitra an'i Colombo: 144km
Расположение: Ny morontsiraka atsimo-andrefan'i Sri Lanka
Zavatra tokony hatao: Fialan-tsasatra amin'ny tora-pasika. Hilalao onja.
Tondro ho an'ny fanamoriana: https://goo.gl/maps/vPYzk9zck9PNEQpu8
Tanàna somary midadasika izany any amin'ny faritra atsimon'ny firenena. Ny halavam-potoana mankany an-drenivohitra dia 115 km. Voalohany indrindra dia i Halle dia toerana iray fitsangatsanganana mahaliana, fa ny fialan-tsasatra amoron-dranomasina eto dia zara raha novokarina. Any amin'ny morontsiraka i Galle, manana torapasika ilay tanàna, fa ity tanàna ity dia tsy azo raisina ho toerana fitsaharana tsara eo amoron-dranomasina.
Lavitra ny seranam-piaramanidina: 145 km
Lavitra an'i Colombo: 115km
Zavatra tokony hatao: Fitsangantsanganana. Hitan'ny olona.
Tondro ho an'ny fanamoriana: https://goo.gl/maps/EoMwpYZ9VV5DrNtj9
Ity tanàna kely ity dia eo amorontsiraka any atsimon'ny firenena. Manomboka eto dia vitsivitsy monja no mankany Halle. Unawatuna no trano malaza amin'ny fialan-tsasatra amin'ny tora-pasika, indrindra amin'ireo tia fialamboly mahaleo tena. Ity toerana ity dia mety amin'ny fitsidihana mandritra ny taona. Ilay tora-pasika malaza indrindra ao Unawatuna no hita ao amin'ny bay. Ny vatohara dia miaro azy amin'ny onja. Noho izany antony izany, na dia amin'ny rivotry ny rivotra mahery aza dia malefaka kokoa eto raha oharina amin'ireo torapasika hafa. I Unawatuna dia manana snorkeling sy milentika. Mbola afaka mandehandeha any anaty ala akaiky indrindra ianao na mandehandeha amin'ny morontsiraka mifanila atsimo.
Lavitra ny seranam-piaramanidina: 150 km
Zavatra tokony hatao: Fialan-tsasatra amin'ny tora-pasika. Nilomano. Diving.
Any amin'ny morontsiraka andrefana, atsimon'ny renivohitra no halavany izay 55 km miala avy eto. Bentota dia 5 km miala. Matetika ny fialantsasatra amidy amin'ny moron-dranomasina dia mahazatra eto, ny mpizahatany mahaleo tena dia tsy misy any Beruwel.
Lavitra ny seranam-piaramanidina: 85 km
Lavitra an'i Colombo: 55 km
Zavatra tokony hatao: Fialan-tsasatra amin'ny tora-pasika. Fitsangantsanganana. zavatra hita
Vanim-potoana: Desambra-Martsa. Oktobra Oktobra.
Tondro ho an'ny fanamoriana: https://goo.gl/maps/NUyJ79ooSmPprje28
Iray amin'ireo tanàna lehibe indrindra ao amin'ny firenena, izay eo amin'ny banky andrefana. 30 km fotsiny ny elanelan'ny renivohitra. Negombo no ivon-jono lehibe. Manome vidiny ambany dia ambany koa ny vidin'ny efitrano sy ny birao. Ao amin'ny faritra fizahan-tany eto an-tanàna dia misy trano fisotroana kafe, trano fisakafoanana, hotely misy ambaratonga rehetra na fivarotana isan-karazany, ao anatin'izany ny alikaola. Fa amin'ny ankapobeny, ny Negombo dia ny fahatongavan'i Sri Lanka (iraisam-pirenena Seranam-piaramanidina Bandaranaikemiainga kilometatra vitsivitsy avy ao an-tanàna). Ary avy eto, ho toy ny fitsipika, ny dianao dia manomboka na aiza na aiza any Sri Lanka.
Lavitra ny seranam-piaramanidina: 5 km
Lavitra an'i Colombo: 30 km
Zavatra tokony hatao: Fitsidihana manerana an'i Sri Lanka. fiantsenana Fialan-tsasatra amin'ny tora-pasika
Tondro ho an'ny fanamoriana: https://goo.gl/maps/S7HJXYwgPQmoGuRB8
Ny renivohitra dia 265 km miala eto. Tamin'ny volana Jolay-Novambra dia lasa Tranc tsara indrindra any Sri Lankan ny fitsidihan'ny ankizy miaraka amin'ny ankizy, satria betsaka ny rano matevina. Ny moron-dranomasina malaza indrindra eo an-toerana dia Upuveli sy Nilaweli. Misy fepetra mety tsara amin'ny fisafoana. Ny vanim-potoana tsara indrindra ho an'ny mpizahatany: Jolay-Novambra.
Lavitra ny seranam-piaramanidina: 233 km (lalana sarotra - farafahakeliny 5 ora amin'ny fiara)
Lavitra an'i Colombo: 265 km (lalana sarotra - farafahakeliny 5 - 5,5 ora amin'ny fiara)
Расположение: Morontsiraka atsinanan'i Sri Lanka
Zavatra tokony hatao: Fialan-tsasatra amoron-dranomasina. Fitsangatsanganana lavitra a!
Tondro ho an'ny fanamoriana: https://goo.gl/maps/3zdRxoUR2fExsYQV8
Ny renivohitra dia 342 km miala eto. Ity trano fandraisam-bahiny ity dia malaza amin'ny toe-javatra tsara indrindra ho an'ny mpisera surf Azonao atao ny manofa fitaovana eo amin'ny toerana mety, na afaka misoratra anarana amin'ny sekoly Surfiste izay ampy eto. Ny vanim-potoana tsara indrindra ho an'ny fahatongavana ao Arugam Bay: martsa-Oktobra.
Lavitra ny seranam-piaramanidina: 380 km (lalana sarotra - farafahakeliny 5 ora amin'ny fiara)
Lavitra an'i Colombo: 350 km (lalana sarotra - farafahakeliny 8 - 8,5 ora amin'ny fiara)
Vanim-potoana: Jolay - Novambra
Tondro ho an'ny fanamoriana: https://goo.gl/maps/ESG4q7LH7qeXY4qW6
Tangalle (Tangall, Tangall)
Ny renivohitra dia 218 km miala eto. Ny florale dia misy zavamaniry tropikaly marevaka. Betsaka ny hazo palmie mihantona eny ambony rano. Tangalle dia malaza noho ny toetrandro mahafinaritra. Mihamafana ny rano eto an-tany mandritra ny taona.
Ao amin'ny trano fandraisam-bahiny amorontsiraka dia manome serivisy serivisy isan-karazany. Misy magazay sy trano fisakafoanana koa hita ao amin'ny habetsaky ny habeny. Saingy, na izany aza, eto dia azo atao tsara ny misotro ronono, miala amin'ny tsy misy dikany raha toa ka reraka ny fiainana alina any amin'ny trano fandraisam-bahiny hafa any Sri Lankan ianao. Any Tangalle, afaka mandry eo ambany hazo palmie ianao ary mianjera ao amin'ny Ranomasimbe Indianina. Ny fe-potoana tsara indrindra hitsidihana io fivarotana io dia ny volana Desambra-martsa sy aogositra-Oktobra.
Lavitra ny seranam-piaramanidina: 212 km
Lavitra an'i Colombo: 182 km
Zavatra tokony hatao: Fialan-tsasatra amin'ny fialantsasatra amin'ny tora-pasika. Nilomano. Diving.
Tondro ho an'ny fanamoriana: https://goo.gl/maps/mBANymrcY488qREH8
Panama beach - Surfing spot
Diving any Puri Jati, Bali, Indonezia
08.09.2020 / fanehoan-kevitra amin'ny Diving amin'ny Puri Jati, Bali, Indonezia tsy misy
Ny riandrano mahafinaritra indrindra any Bali, Indonezia
07.09.2020 / 1 Comment amin'ny riandrano mahafinaritra indrindra any Bali, Indonezia
Ho an'ny laharam-pitehirizako manokana ny toerana tsara indrindra hitoetra ao Sri Lanka: